Baahin: Sabti, May 21, Weriye Xalima Sacdiya ~ Daljir ~ Garowe. Tobaneeyo ku dhintay gaadiid daad qaaday; waddada halbowlaha ah ee isku xirta gobollada Puntland oo xiran kadib buundo jabtay; Abshir Ismaaciil oo ka mid ah dadkii gurmadka ahaa ayaan waraysanay … Labada Shariif oo mar 3-aad kulmay, kuse kala kacay fadhigii; khilaafka siyaasadeed oo halkiisii taagan … Imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee dugsiyada dhexe iyo sare ee Puntland oo maanta furmay; Qaar ka mid ah ardayda imtixaanaadka u fariisatay maanta ayaan waraysanay; Wasiirka waxbarashada ayaan isna waraysanay … M/weyne Shariif oo xilkii ka qaaday qunsulkii safaaradda Somalida ee Nairobi, kuna badalay nin ay isu dhaw yihiin … Ciidamo ka tirsan maamulka Dooxada Shabeele oo weerar ku qaaday fariisimo ay Al-shabaab ku lahaayee – Radio Daljir
Baahin: Sabti, May 21, Weriye Xalima Sacdiya ~ Daljir ~ Garowe. Tobaneeyo ku dhintay gaadiid daad qaaday; waddada halbowlaha ah ee isku xirta gobollada Puntland oo xiran kadib buundo jabtay; Abshir Ismaaciil oo ka mid ah dadkii gurmadka ahaa ayaan waraysanay … Labada Shariif oo mar 3-aad kulmay, kuse kala kacay fadhigii; khilaafka siyaasadeed oo halkiisii taagan … Imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee dugsiyada dhexe iyo sare ee Puntland oo maanta furmay; Qaar ka mid ah ardayda imtixaanaadka u fariisatay maanta ayaan waraysanay; Wasiirka waxbarashada ayaan isna waraysanay … M/weyne Shariif oo xilkii ka qaaday qunsulkii safaaradda Somalida ee Nairobi, kuna badalay nin ay isu dhaw yihiin … Ciidamo ka tirsan maamulka Dooxada Shabeele oo weerar ku qaaday fariisimo ay Al-shabaab ku lahaayee